Duuliye Sare Asli Xasan Cabaade [Calansida] oo Ilmo Kaga Soo Degatay Garoonka Diyaaradaha Garaad Wiilwaal. – Rasaasa News
Apr 12, 2013 ogaden somali
Jijiga, Apr 11, 2013 – Waxaa maanta ka soo degay garoonka diyaaraha ee Garaad Wiilwaal, duuliye sare Asli Xasan Cabaade [calansida], oo ay weheliyaan sadex ruux oo ka soo raacay dalka Sweden.
Duuliye sare Asli Xasan Cabaade, waxaa soo dhawayn qaran loogu sameeyey garoonka diyaaraha ee Garaad Wiilwaal, halkaas oo jidka ay heereero tubnaayeen boqolaal ruux oo ka qayb qaadanayey soo dhawaynteed.
Duuliye sare Asli Xasan Cabaade [asli calan sida] oo ah gabadhii ugu horaysay Somalida oo diyaarad duulisa, ayaa kolkii ay ka soo degtay garoonka garaad wiilwaal dhunkatay dhulka, iyada oo ilmaynaysa.
Duuliye sare Asli Xasan Cabaade, in kasta oo ay asal ahaan ka soo jeedo degaanka Somalida Ethiopia [Ogaden]. Hadana intii ay dagaalada iyo dhibaatooyinku ka jireen degaanka, marna laguma arag fagaarah laggaga hadlayo dagaalanka colaad iyo nabad midna.
Aniga oo aan ka xumayn kuna faraxsan soo dhawaynta Asli, hadana waxaa meesha ku jirta in mudnaanta cida leh la siiyo, hadii kale waxaa meesha ka baxaysa hanaanka dawladnimada iyo ku tartanka wax u qabashada dalka iyo dadka.
Waxaa laga yaabaa in diyaarada siday Asli ay saarnaayeen dad ka mudan soo dhawaynta Asli la siiyey, balse ayna arkin indhaha musuqa iyo hungurigu.
Waxaana meeshaas ka muuqda in dadkii reer Somaliya ee sharciga degaanku uu shaqada u diiday in maanta ay shaqada iyo shaxaadkuba iyaga u furan yahay sida ka dhex muuqata masuuliyiinta degaanka.
Soo dhawaynta duuliye sare Asli Xasan Cabaade waxaa ka qayb galay masuuliyiin tiro badan oo ka tirsan dawlada degaanka Somalida Ethiopia oo ay ka mid ahaayeen;
1. Gudoomiyaha wakaalada Qurbo-joogta Cabdi-Bari Macalin Axmed,
2. Madaxa Xafiiska Jidadka Khadar Cabdi Ismaaciil
3. Gudoomiyaha wakaalada ka hortaga HIV/AIDs Hure Cabdi Adar
4. Gudoomiyaha wakaalada xulka Abuurka beeraha Cabdi-risaaq Axmed
5. Gudoomiyaha wakaalada ilaalinta degaanka macdanta iyo tamarta Badal Xiis Farlow
6. L/taliyaha m/waynaha arimaha Qurbo-joogta iyo maalgashiga Maxamuud Xaaji C/shakuur
7. Maareeyaha wakaalada kiraynta guryaha Cabdi Maxamed Gamaadiid
8. Maareeyaha ururka horumarinta Somalida Khadar C/maan
9. Maareeyaha wakaalada daawooyinka Dr. C/fataax Nuur.
10. Ku xigeenka Xafiiska Horumarinta wabiyada iyo dooxooyinka Ibrahin Mubarak
11. Ku xigeenka wakaalada Qurbo-joogta Cabdi Khalif
12. Wakiilka wakaalada Qurbo-joogta Addis Cabdi Aden
13. Madaxa wakaalada website-ka Bashe Cabdi
14. Ku xigeenka wakaalada daraasaadka iyo naqshadaynta Guled aw Cali Kahin
Iyo Masuuliyiin kale oo badan.
Hadaba, waxaa iswaydiin leh masuuliyiinta tiradaas leh miyeyna shaqo haynin, muxuuyahay baratakoolka soo dhawayynta wasiirada ee safarka qaraabo salaanka ah.